စနစ်မယ့်စောင့်ရှောက်ကူညီပေးနေစဉ်ကိုဘယ်လိုလူတွေ "သတိ" အကြောင်းပြောဆိုနိုင်သလဲ မာတင် Vrijland
အတွက် Filed NEWS ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း	by မာတင် Vrijland	ဇူလိုင်လ32019 အပေါ်	•4မှတ်ချက်
သင်သည်များစွာသောလူတွေသတိအကြောင်းပြောဆိုနားထောင်ကြလော့။ တချို့ကတစ်ဦးဂုရုရှာအံ့သောငှါ, အခြားသူများကိုဆငျခွငျသို့မဟုတ်ယောဂကျင့်ကိုကျင့်လော့ အခြားသူများကိုဘုရားကျောင်းကိုသွားသို့မဟုတ်ဘာသာရေးသို့မဟုတ်ဝိညာဉ်ရေးမဆိုကြင်နာလုပ်ပါ။ အဆိုပါကြီးတွေနက်နဲသောအရာကလူအတော်များများရွက်ဆက်လက်အနက်ဆုံးသောတွင်းမှဦးဆောင်သောမြစ်ပေါ်တွင်နေဆဲသူတို့ရဲ့သင်္ဘောနဲ့အတောအတွင်းစင်ကြယ်သောတိုက်ဖို့ကြိုးစားနေခြင်းကိုခံရပုံပေါ်ကြောင်းမည်မျှရှိသနည်း
စနစ်ထိန်းသိမ်းရန်ကူညီပေးသည်တစ်ချိန်ကဘယ်လိုသင်အဖြစ်ဝိညာဏ်၏စကားပြောဆိုနိုင်သလဲ ဘယ်စနစ်က? အဆိုပါစနစ်အားဝိညာဏ်ထိခိုက်အပေါ်လုံးဝအခြေစိုက်လျက်ရှိ၏ ငါတို့သည်လည်းဆိုတဲ့ဝေါဟာရကို "လူ့အဖွဲ့အစည်း" အနှစ်ချုပ်စနစ်။ ဘယ်လိုလူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ကြွက်ပြိုင်ပွဲဝင်ရန်ဆက်လက်နိုင်ပါတယ်; ကုမ္ပဏီစုစုပေါင်းရဲ့အသိအမြင်အဖျက်သမားနေစဉ်, ဝိညာဏ်မပြောတတ်နှင့်ဝိညာဉ်ရေးအမျိုးမျိုးမျိုးကွဲလေ့ကျင့်? ကပေါ်မယ့်အရာကိုမထိုးဖောက်ကောင်းတစ်ဦးရှိသည်ဖို့ကမ်းခြေကိုသင်၏သင်္ဘော တင်. ရန်အချိန်မဟုတ်လော
ဒါဟာသင်ဤနိဒါန်းတွင်ထင်ကြောင်းဖြစ်နိုင်သည်: "အဲဒီအသိကိုလုပ်မပေးဘူး! ကျွန်မယုံကြည်သူဖြစ်ကြောင်းကိုနဲ့ကျွန်မဝိညာဉ်ရေးရာပေါ့ငါပဲသူတို့ကိုကြောင်းသဘောထားကိုအားဖြင့်လောကဓာတ်တိုးတက်လာဖို့ကူညီ"။ သင်တို့မူကားနံနက်၌ရှိကြ၏သို့မဟုတ်သင်ကိုလည်းထပ်မံသစ်ကို Rover အသင်းကအနည်းငယ်အလုပ်မလုပ်ဖို့ပိုကောင်းပြုလိမ့်မည်သောမျှော်လင့်ချက်၌သင်တို့၏မဲချပစ်ခဲ့ကြပေမည်သည့်နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေအပေါ်ကျွန်ပြုမှုနှင့်အမှီခိုအပေါ်အခြေခံပြီးစနစ်တစ်ခုကိုသွား ပြီးခဲ့သည့်ထက်။ "သို့သော်သင်သည်အဘယ်အရာကို Vrijland သလဲ? မင်းမဲ့စရိုက်? ငါသည်ကိုယ်အလိုအလျောက်အခှနျကိုရပ်တန့်ပေးဆောင်ခြင်းမပြုတာငါ့အလုပ်ဆေးလိပ်ဖြတ်ဖို့ငါ့ကိုယ်ပိုင်အပေါ်မဟုတ်ပါဘူး။ ငါဒဏ်ငွေနှင့်ဘီးလစ်နှင့်အတူအပြစ်ပေးငါနှင့်ငါဖြစ်ကောင်းငါ့အိမျထဲကကိုတင်ပါမယ်လျှင်ထိုအခါထိတွေ့ငါအရာအားလုံးကိုဆုံးရှုံးငါမရှိတော့ငါ့မိသားစုထောကျပံ့နိုငျ"။
ငါမူပိုင်၏စွပ်စွဲချက်ချိုးဖောက်မှုနှင့် ပတ်သက်. အဓိကလူသိများပရင်တာထုတ်လုပ်သူတွေနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုအငြင်းပွားမှု၏ရလဒ်အဖြစ်သုံးစွဲလျက်ရှိသည်တစ်တက္ကဆက်ထောင်ထဲမှာ5နှစ်ပေါင်းအကြောင်းကိုတစ်စုံတစ်ဦးကမိန့်မြွက်တော်မူ၏။ မရှိရင်နောက်ထပ်ရန်ခေတ္တဖော်ပြရန်စိတ်ဝင်စားဖို့ထောင်ထဲမှာသည့်စနစ်၌သူ၏အတွေ့အကြုံကိုရှင်းပြဖို့တိုးချဲ့။
လူကိုအမှန်တကယ်စောင့်ပိုပြီးသို့မဟုတ်အကျဉ်းသားအချင်းချင်းအတွက်ထုတ်ထားတဲ့စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုလိုက်နာမှလျော့နည်းအတင်းအကျပ်ခဲ့ကြသည်ဘယ်မှာမင်းမဲ့စရိုက်တစ်ဦးကြင်ကြင်နာနာ, နိုင်ကြဒီထောင်ထဲမှာ (အနည်းငယ်တထောင်နှင့်အတူဖမ်းမိ) ထိုသို့ပြောသည်။ သူတို့ရေနွေးလိုချင်တယ်ဆိုရင်သူတို့အလုပ်ကိုရပ်တန့်စုပေါင်းအားဖြင့်ဒီပြဋ္ဌာန်းရန်နိုင်ဘူး။ ကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးအနွယ်နှင့် (ထောင်ဖွဲ့စည်းခဲ့သော) လူမျိုးစုအကွီးအကဲမြားအကြား code တွေရဲ့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ရှိပါတယ်ကြောင့်သူလည်း, ခဲမဆိုအကြမ်းဖက်မှုရှိကွောငျးကိုညွှန်ပြ။ ၎င်း၏အမူအကျင့်များအပါအဝင်လူ့အဖွဲ့အစည်းဤပုံစံအကျဉ်းသားများကြွလာနှင့်ခရီးသွားရာတွင်ကြားမှဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေပါသည်။
တကယ်တော့သူကလွတ်လပ်စွာထောင်ထဲမှာစနစ်၏စည်းမျဉ်းများ operated တစ်ခုမင်းမဲ့စရိုက်လူ့အဖွဲ့အစည်းဖော်ပြထား; ရှိနေသော်လည်းကအားလုံးကိုထောင်ထဲမှာ၏နံရံအတွင်းအရပ်ဌာနကိုယူ။ ဒါဟာမင်းမဲ့စရိုက်ပုံစံဥပဒေများနှင့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအပေါ်ပေမယ့်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်လေးစားမှု, သဘောတူညီချက်များနှင့်အမျိုးမျိုးသောအမြိုးအနှယျဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်အခြေမခံခဲ့သည်။ အဆိုပါအုပ်စုတွင်တစ်စုံတစ်ဦးက misbehaved အကယ်. သူတို့ကိုစကားပြောဖို့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးတို့ကဒီအဖွဲ့ကိုဖြေရှင်း။ တကယ်တော့သူကအဟောင်းအိန္ဒိယအနွယ်တို့တွင်အလုပ်လုပ်ခဲ့ပုံကိုကနှိုင်းယှဉ်; (ကိုလံဘတ်စ်ရောက်ရှိချိန်အထိ) အမေရိကတိုက်နှင့်မျှမတို့ရဲမူရင်းသူမြို့သားနေသောအိန္ဒိယအနွယ်တို့, ဥပဒေများ, ကျောင်းများနှင့်အကျဉ်းထောင်များငြိမ်းချမ်းစွာအတူတကွနေထိုင်ခဲ့တယ်။
တကယ်တော့ထိုကဲ့သို့သောအကျဉ်းထောင်ကျနော်တို့ဘားမပါဘဲတစ်ဦးအကျဉ်းထောင်မှအတွက် ပို. ပို. မြင်နိုင်သောအတွက်တစ်ခုလုံးကိုလူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့တစ်မိုက်ခရိုမော်ဒယ်ဖြစ်ပါတယ်အသက်ရှင်ရန်ပုံရသည်။ သူတို့ကိုယ်တိုင်၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သောကြောင့်အတော်များများကသေး, ဒီအသိအမှတျမ "ဟုအဆိုပါအစောင့်အဖွဲ့က။ " အသစ်ကသားစဉ်မြေးဆက်လေ့ကျင့်သင်ကြားစောင့်နေကြသည်ဘယ်မှာအခြားသူများက, ပညာရေးဥပမာအလုပ်လုပ်ကြသည်။ အဆိုပါ '' အစောင့် '' ငါဆိုလို: ဒါပေါ်နှင့်ဒါထွက်မန်နေဂျာသင်တန်းဆရာ, အရာရှိများ, အခွန်စစ်ဆေးရေးမှူး, ရဲအရာရှိများ, စစ်သားများ, စာရင်းကိုင်, ရှေ့နေတွေနဲ့များ၏မျိုးဆက်သစ်။ အခြားသူများကအစိုးရ, ဆက်နွယ်ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီများ, ဝန်ဆောင်မှုများသို့မဟုတ်အများပြည်သူသို့မဟုတ် Semi-အများပြည်သူလက်သို့အပ်ထုတ်ကုန်များအတွက်အလုပ်လုပ်ကြသည်။ အတော်များများကအလုပ်ယခုကြှနျုပျတို့ '' လူ့အဖွဲ့အစည်း '' ကိုခေါ်ထားတဲ့အကျဉ်းထောင်အမိုးခုံးများစီမံခန့်ခွဲမှုကိုအထောက်အကူပြုရန်တစ် function ကို၌တရား left သို့မဟုတ်။ ထိုအခါအမိုးခုံး၏ဗဟိုမျှော်စင်တွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်ပိုမိုလူများ, ပိုကတစ်ဦး shared သဘောမျိုးကျနော်တို့အဘယ်သို့ပြုမည်အရာကိုတော်တော်ကောင်းကောင်းရှိပါတယ်။ လူမှုရေးစုဝေး, ပါတီများနှင့်ပါတီများမှာသင်တို့သည်ဧကန်အမှန်စနစ်အတွက်အလုပ်လုပ်သူကိုပြည်သူကဝိုင်းရံလျက်ရှိသည်။
အချိုးအကျဉ်းသားများနှင့်အစောင့်အဖြစ်နေဆဲသိသိသာသာကွဲပြားသောကွောငျ့ကံမကောင်းစွာပဲအဆိုပါတက္ကဆက်ပြည်နယ်အကျဉ်းထောင်၏စံနမူနာနည်းသက်ဆိုင်ရာဖြစ်လာ။ အတော်ကြာတစ်ဒါဇင်အစောင့်အပေါ်အကျဉ်းသားများထောင်နှင့်ချီ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူ့အဖွဲ့အစည်းများတွင်နီးပါးအဖြစ်အများအပြားဖန်တီးသူ, အဆိုတော်များနှင့်စည်းမျဉ်းများနှင့်အဥပဒေများကိုစာရင်းစစ်များနှင့်လူများက Self-created စနစ်၏က၎င်းတို့၏ရပ်တည်ချက်ရှိတယ်, (သူတို့ကနှင့်အတူ၎င်းတို့၏လူနေမှုဝင်ငွေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့) သွားစောင့်ရှောက်လော့။ အလွန်အမင်း functional ဖြစ်စေမိမိကိုယ်ကိုသို့စီးဆင်းသည့်မင်းမဲ့စရိုက်ပုန်ကန် (ငါပြောသောယခင်အကျဉ်းသားများကဖော်ပြထားသကဲ့သို့) နီးပါးတစ်ဦးမဖြစ်နိုင် option ကိုပုံရသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏လူ့အဖွဲ့အစည်း (ဖတ်ပါပိုစတန်းဖို့ဒ် (Zimbardo) စမ်းသပ်မှုကာလအတွင်းဖြစ်ပျက်ကဲ့သို့ဖြစ်၏ ဒီမှာ).
သို့သျောလညျးသငျသညျမြားကိုလညျးဘာသာ, ဝိညာဉ်ရေး, ယောဂဂုရု, နှင့် (အနက်ဆုံးသောတွင်းဆီသို့စီးဆင်းရာ) မြစ်၏ဒါကြောင့်အပေါ်၎င်းတို့၏သေသပ်စွာပွတ်ဝိညာဉ်ရေးရာယခုအချိန်တွင်အတူဒါအလုပ်များရသောသူအပေါင်းတို့ကလူမယ်ဆိုရင်မျှော်လင့်ချက်ရှိကွောငျးပွောဆိုနိုငျသညျ။ သို့မဟုတ်သင်အနက်ဆုံးသောတွင်းအောက်ပါအတိုင်းအဘယ်သူမျှမရှိကွောငျးထင်ပါမည်နည်း သငျသညျတစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းဟာလူ့အဖွဲ့အစည်းလုပ်ငန်းလည်ပတ်နိုင်မစဉ်းစားပါပြုကြလော့ ကျွန်တော်ဆက်ရေးမြင်ရပါလိမ့်မည်ကြောင်းလမ်း? သငျသညျအကြှနျုပျတို့ကိုတိုးလွတ်လပ်မှုကိုမဆိုကြင်နာတိုးကန့်သတ်သည်လူတိုင်းအတွက်ပြည်နယ်ဥပဒေများနှင့်စည်းမျဉ်းများအစဉ်အဆက်-ကျဉ်းမြောင်းလမ်းကြားအတွင်းကခုန်ရမယ်တဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ပြည်နယ်, ဆီသို့ဦးတည်ရွေ့လျားကြောင်းသတိထားမိပါလိမ့်မယ်?
လူတွေကိုအသိပညာနှင့်အတူဒါစိုးရိမ်ပူပန်နေကြသည်ဆိုလျှင်, မဟုတ်ရင်လိုလားတဲ့သူတစ်ဦးအောက်ရေစီးတစ်နေရာရာမှာနေဆဲရှိသေး၏။ သို့သော်ဘာသာတရားများ၏မှားယွင်းသောမျှော်လင့်ချက်အဘို့များစွာသောကျဆုံးခြင်းနှင့်အတူတူပင်ဘာသာရေးညာဘက်ဝက်အူချောင်းအဖြစ်ကယ်တင်သောသခင်၏မှားယွင်းသောမျှော်လင့်ချက်စောင့်ရှောက်ဖို့လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်းနှင့်ထိုအတောအတွင်းအတွက် duality (polarity က) ကိုဖန်တီးရန်ဒီဇိုင်း "ဟုအဆိုပါစနစ်အား" တစ်ဦးတီထွင်မှုကြောင်းနားလည်သဘောပေါက်ကြဘူး ။ ဒါကဝက်အူချောင်းလူတွေကိုသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဝိညာဏ်ကိုသက်ဝင်ခြင်းမရှိဘဲ, အပြောင်းအလဲအတွက်မျှော်လင့်ပါတယ်ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ '' Activate 'ဤညာဘက်စကားလုံးမဖြစ်စေခြင်းငှါ, ဖြစ်ပါတယ်။ "အထဲကခေတ္တ" ဖြစ်ကောင်းပိုကောင်းတဲ့ဖော်ပြချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာရုံခန်းနှင့် (ဝိညာဉ်ရေး, Bikram ယောဂ, ဘာဝနာသို့မဟုတ်ဆုတောင်းပဌနာကနေတဆင့်) ကိုသင်္ဘော၏ကုန်းပတ် polish မှရပ်တန့်ဖို့အမြင့်ဆုံးအချိန်ဖြစ်ပါသည်, သို့သော်ပဲ့ ယူ. စနစ်မြစ်ထဲကသင်္ဘောရဖို့ ။ သငျသညျမြစ်အမှန်တကယ်အနက်ဆုံးသောတွင်းဆီသို့ဦးဆောင်ကြောင်းတွေ့ရှလျှင်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကလှုံ့ဆော်ထားသည်။
ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကပထမဦးဆုံးဝိညာဏ်၏အဓိပ္ပါယ်ကိုစဉ်းစားရန်ဤအခြေအနေတွင်အသုံးဝင်သည်။ သိပ္ပံနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုလူ့ဦးနှောက်၏မြေပုံမှလူအင်အားငွေကို Google ဗျည်းအက္ခရာတွေအများကြီးအဖြစ်ဖြုန်းနေကြတယ်။ Google ရဲ့အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် Ray Kurzweil ဝိညာဏ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ schedelpan အတွက်အာရုံခံ၏နံပါတ်၏ရလဒ်ဖြစ်ပြီးလူကိုနို့တိုက်သတ္တဝါများအနေဖြင့်ကွဲပြားသည်အဘယ်ကြောင့်ဤအကြောင်းယုံကြည်စိတ်ချဖြစ်ပါတယ်။ လူ Neo-cortex ရှိပြီး, အရှင်ဝိညာဏ်ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ကြဖို့လုံလောက်တဲ့ဦးနှောက်ဆဲလ်တွေရှိသည်ကြောင့်ဤအဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သိပ္ပံနှင့်မြင့်မားသောနည်းပညာကုမ္ပဏီများအတွက်အသိအမြင်ဦးနှောက်လှုပ်ရှားမှု၏ရလဒ်ဒါ။ ဝိညာဏ်၏အကြှနျုပျ၏ချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ပါသည်: သိစိတ်ကိုဒီဇယ်သို့မဟုတ်လူ့ဇီဝကိုယ်ပွားကိုထိန်းချုပ်ထားသော Joystick သော။
သငျသညျအကြှနျုပျတို့ multi-player ကိုတုပခြင်းဘဝ၌နေသောပထမဦးဆုံးမြင်ဖြတ်သန်းသွားရန်ရှိသည်နားလည်ရန်။ ဒါက '' ကဲ့သို့မြည်စေခြင်းငှါဘုရားသခငျ၏လုံးဝလွတ်လပ်သော"(Crazy) ကိုနား၌, ဒါပေမယ့်မစိုးရိမ်ပါ; ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တစ်ဦးခြင်း simulation တှငျနထေိုငျသောသင်ပြောပြရန်လည်းကောင်းသောကြောင့်ကြီးမားသောနည်းပညာကုမ္ပဏီတွေရဲ့ transhumanists နှင့်သိပ္ပံပညာရှင်များသည်။ ကလူ Elon Musk (နှင့်အကြောင်းပြချက်နှင့်အတူ) အဖြစ်ပျော်ရွှင်ဖြစ်ကြောင်းလုပ်ပါ။ ဒါပေမဲ့သူတို့ကကျနော်တို့ဟာအလွန်တိကျတဲ့ Luciferian ဘဝခြင်း simulation ၌နေသောမရှိဟုဆိုသည်။
သင်ခြင်း simulation အပေါ်မှာငါ့ဆောင်းပါးစီးရီးကိုဖတ်ပါလျှင် (မှန်မှန်ကန်ကန်နားလည်ဘာသာပြန်ထားသောလျှင်), သငျသညျကျွန်တော်တစ်ဦးခြင်း simulation တှငျနထေိုငျသောစိတ်ကူးအဘို့အပြည့်အဝသက်သေအထောက်အထားများကြောင့်ကွမ်တမ်ရူပဗေဒထွက်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ ငါအဆိုပြုဒီ၏အရေးပါသောရှင်းပြချက် ဤဆောင်းပါးတွင်။ ဒါဟာဒီကွန်ရက်ရဲ့ menu ကိုသွားပြီးမီနူးကို item '' ခြင်း simulation '' ကိုရွေးချယ်ခြင်းအားဤအခြေအနေတွင်လည်းအသုံးဝင်သည်။
'' ဘဝ '' တကယ်ကောင်းတစ်ဦးဖော်ပြချက်မဟုတ်ပါဘူး။ ကြှနျုပျတို့သညျ "တစ်ဦးခြင်း simulation '၌နထေိုငျပါဘူး: ငါတို့သည်အကဲခတ်များနှင့်ကစားသမားဖြစ်ကြသည်။ ကျနော်တို့က controller ကို (သို့မဟုတ်အဟောင်းမျိုးဆက်အတွက် 'Joystick') နှင့်အတူအိပ်ရာပေါ်လက်တော်၌ရှိသူတို့အားကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏ကျနော်တို့ကစားသမားကိုတွေ့မြင်သောမျက်နှာပြင်မှာရှာဖွေနေ; မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိဂိမ်းထဲမှာပါဝင်အဆိုပါကစားသမား / ကိုယ်ပွား။ ဦးနှောက်အပါအဝင်ကျွန်ုပ်တို့၏အလောင်းတွေကဒီ Multi-player ကိုဂိမ်းထဲမှာကိုယ်စားပြုပုံဖြစ်ပါသည်။ ကျနော်တို့ AI အ (အတုထောက်လှမ်းရေး) စိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေအများကြီးထင်နှင့်စဉ်းစားရန်ရွေးချယ်မှုများရှိကြောင်းအော်ဂဲနစ်ဦးနှောက်နှင့်အတူ avatars ရှိပါဘူး, ဒါပေမယ့်အမှန်တကယ်ကစားသမားပြင်ပဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်စားပြုပုံကိုအလွန်လက်တွေ့နှင့်မြင်သာထင်ခံစားမိ, ကျွန်တော်တို့ကိုလှည့်ပတ်ကမ္ဘာကြီးကိုနဲ့တူ '' materializes '' ။
ထူးထူးဆန်းဆန်းထုတ်ပြန်ချက်များသင်ထင်ကြသည်မဟုတ်လော မပေးသင်သာကိစ္စစောင့်ကြည့်ခြင်းဖြင့်တည်ရှိကြောင်းသက်သေပြရာရူပဗေဒပညာရှင် Niels Bohr အားဖြင့်နှစ်ဆအလျားလိုက်အပေါက်စမ်းသပ်မှု, နားလည်လျှင်, သင့် TV ဖန်သားပြင်က Playstation ပေါ်မှာတစ်ခုတည်းသောရုပ်ပုံသင်သည်သင်၏ controller ကိုရွှေ့တဲ့အခါမှာတည်ရှိခြင်းနှင့် "ဤလောကနှင့်အချိန်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်မှာ" ဟုအဆိုပါဂိမ်းကိုကြည့်သည်။
ဒီအမြင်ကနေဝိညာဏ်၏အဓိပ္ပါယ်, ထို့နောက်: သင့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်နှင့်စိတ်ကိုထိန်းချုပ်ထားခြင်းနှင့်သင့်ဦးနှောက်ကိုယူပြီးစဉ်းစားကြောင်းရွေးချယ်မှုစေသောတတိယပါတီ။ ဝိညာဏ်ဖြစ်ပါတယ် အတွက် ဦးနှောက်လှုပ်ရှားမှုနဲ့ အတွက် တစ်ဦးချင်းစီလုပ်ရပ်။ ဝိညာဏ်ကိုဤ virtual reality အပြင်ဘက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဝိညာဏ်သင်မည်သူဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျဝိညာဏ်ဖြစ်၏ သငျသညျသငျ့စိတျသို့မဟုတ်သင့်ခန္ဓာကိုယ်မရှိကြပေ။ သင့်ခန္ဓာကိုယ်ကဒီခြင်း simulation အတွက်သာကိုယ်ပွားဖြစ်ပါတယ်။
ပြောင်းလဲပစ်ရန်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းဝိညာဏ်၏အဆင့်မှာနေရာတစ်နေရာယူနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့အမှန်တကယ်သတ်မှတ်သင့်တယ်ဘယ်လိုမြင်လွှာပေါ်တွင်ကယ့်ကိုအကောင်းမရဒါအရေးကြီးပါတယ်ဘာကြောင့်ပါပဲ။ သင်အမှန်တကယ်ကျနော်တို့ဘဝတစ် Luciferian multiplayer ခြင်း simulation ၌နေသောနားလည်နေကြတယ်, သငျသညျအရာခပ်သိမ်းသတိကနေဖန်ဆင်းထားသည်နှင့်အသငျသညျကမျးရန်သင့်သင်္ဘောထားရန်အခမဲ့ရွေးချယ်မှုရှိသည်နှင့်ပြောင်းလဲမှုရှိကွောငျးဖြစ်နိုင်သောကြောင်းကိုမြင်လိမ့်မည်။ ဒါဟာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်း (လူစီဖာ) ပုံရသည်ဂိမ်းတစ်ခုဆောက်ဖော်ထုတ်ရန်ဆိုတဲ့အချက်ကို, အဲဒါကိုလည်းမရှိကြောင်းမှန်သည်ဝန်ခံရမည်, ကခက်ခဲသည် ရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့ script ကို ဖြည့်စွက်ရန် script ကိုကူညီဖို့လိုအပျကွောငျးဂိမ်းနှင့်သရုပ်ဆောင်များကို (ကိုယ်စားပြုပုံ) ။ ဒါဟာပိုပြီးကစားသမားဇာတ်ညွှန်းအရသိရသည်ဂိမ်းကစားခြင်းကိုရပ်တန့် သို့ဖြစ်. လိုအပ်သောဖြစ်ပါတယ်။
ကြှနျုပျတို့သညျဤခြင်း simulation play ဘာလို့အကြောင်းပြချက်ဖြစ်နိုင်ရှိပါသည်။ ဤအကြောင်း, ငါကိုဖော်ပြရန်ရန်ကြိုးစားခဲ့ကဘာလဲ ဤဆောင်းပါးတွင်ဘယ်ငါသညျဤခြင်း simulation ဖြစ်ကောင်းစနစ် '' ကွမ်တမ်လယ်ပြင်၌တစ်ဦးဗိုင်းရပ်စ်သို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖြစ်တည်မှု၏ All-လွှမ်းခြုံပင်မဆဲလ် (ထိုပင်စည်ဆဲလ်သို့မဟုတ်အရာအားလုံးထွက်လာသည့်အနေဖြင့်သတင်းအချက်အလက်စီးဆင်းမှု) ကြောင်းကိုရှင်းပြဖို့ကြိုးစားခဲ့ပြီ။ ပြီးနောက်ခဏဆောင်းပါးကိုဖတ်ပါ။
သငျသညျအကြှနျုပျတို့ကြောင့်ဗိုင်းရပ်စ်စနစ်၏ရည်ရွယ်ချက်ဒီကျော်လွှားနှင့် recover မှမဟုတ်ကြကျွန်တော်တို့ကိုဒီပုံရိပ်စစ်အတွက်ပြဿနာများနှင့် ပတ်သက်. မစိုးရိမ်စေရန်လိုအပ်ကြောင်းကိုလည်းပြောပါနိုင်ဘူး။ သင့်ခန္ဓာကိုယ်ဟာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးတိုက်ခိုက်ရှင်သန်နိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့သတိပုံစံ (ဝိညာဉျကိုသို့မဟုတ်သမျှသင်ကမခေါ်ချင်) ကိုလည်းဗိုင်းရပ်စ်တိုက်ခိုက်မှုရှင်သန်နိုင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ Sims ကိုယ်ပွားအဆင့်ကိုလုပ်ဖို့ရှိခြင်း, သို့သော်, ထင်ပါတယ်။ အရာ ညီမျှ သို့သော် Sims Self-အဆင့်ပါ။ ဒါဟာဗိုင်းရပ်စ်ပိုး-ခြင်း simulation ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဗိုင်းရပ်စ်စနစ်၏အောင်ပွဲဗိုင်းရပ်စ်ဆဲလ်တိုက်ခိုက်ခြင်းအားဖြင့်ပြုသောအမှုဖြစ်ပါတယ်။ မရအတွင်းကနေ, ဒါပေမယ့်မပါဘဲမှ။ အဘယ်သူ၏တာဝန်သူတို့အစွမ်းသတ္တိနှင့် built ဒီဗိုင်းရပ်စ်ပိုးခြင်း simulation ၏ဝိညာဏ်၏အခြားပုံစံများကိုစမ်းသပ်ဖို့ပဲပုံသဏ္ဍာန်-entity လူစီဖာ, ထို့ကြောင့် entity အဆင့်မှာကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရမည်ဖြစ်သည်။ အဲဒီဝိညာဏ်၏အဆင့်မှာဒါပြုသောအမှု။
ဒါဟာကျနော်တို့စနစ်ကနေဖယ်ထုတ်လိမ့်မည်ဆိုတာသေချာကြောင်းရွေးချယ်မှုလုပ်ရှိသမျှကျွန်တော်တို့ရဲ့လူ့ (ကိုယ်ပွား) ခံစား (ထင်) ဆန့်ကျင်သည်။ ဒါဟာကမ်းဖို့သင်္ဘောကို တင်. နိုင်ရန်အတွက်လုံခြုံရေးနှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအပေါငျးတို့သသဘောအရဆန့်ကျင်တတ်၏။ ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့, ငါတို့သည်စီးဆင်းမှုနှင့်အတူလိုက်လျှင်အနည်းဆုံးငါတို့သည်ငါတို့၏ငှားသို့မဟုတ်ပေါင်နှံဆပ်ဖို့ဆက်လက်နိုင်သည်ကိုစဉ်းစားပါ။ ကျနော်တို့ကစနစ်အတွက်အလုပ်လုပ်နေရပ်တန့်တဲ့အခါမှာကျနော်တို့ဆုံးရှုံးဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသားစုနှင့်အရာခပ်သိမ်းကိုထောကျပံ့မပေးနိုငျကွောငျးထင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာစဉ်းစားတွေးခေါ်ဖြေရှင်းဖို့လိုအပ်ပါတယ်လို့ထင်ပါတယ်။
ငါတို့သည်ငါတို့၏ကိုယ်ပွားကိုထိန်းချုပ်ရန်နှင့် "ဟုအဆိုပါဂိမ်းထဲမှာလှုပ်ရှားမှုတွေ" ဟုအဆိုပါထိန်းချုပ်မှုမှာထိုင်သောပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးမှနောက်ကျောပေးရမထားရင်, ကျနော်တို့လူတစ်ဦးပိုကောင်းတဲ့ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်ကစားရန်ရှိကြောင်းရှာဖွေတွေ့ရှိ။ ယင်းက Playstation ဂိမ်းအတွက်ကိုယ်ပွားဒါမှမဟုတ်ကိုယ်ပွားကိုထိန်းချုပ်ထားခဲ့သူတဦးတည်း: သူကားအဘယ်သူပိုကောင်းဆုံးဖြတ်ချက်များကိုသင်ထင်ပါသလဲစေနိုင်သနည်း
ထိုသို့အသိအမြင်ကနေသတိနှင့်သာလုပ်ရပ်နားထောင်ရန်အချိန်ဖြစ်ပါသည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်သင်တန်းကိုပြောင်းလဲရန်နှင့်မြစ်မှသင်၏လှေရဖို့ကရွေးချယ်ရမယ်ဆိုလိုပေလိမ့်မည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်သင်၏ဦးနှောက်ကိုယ်ပွားယခုအချိန်တွင်ဝတ်နှင့်သင့်သတိစကားကိုနားထောငျဖို့ရှိသည်ဖို့လိုပါတယ်ဆိုလိုသည်။ ဘာဝနာသို့မဟုတ်သင်ကိုရပ်တန့်စေသောအခြားနည်းလမ်းများအမျိုးမျိုးကြောင့်သင် (အနက်ဆုံးသောတွင်းဆီသို့ဦးဆောင်) သင့်သင်္ဘောလှုပ်ရှားမှုကိုယူစေသင့်ပါတယ်။ အမှု, ထို့နောက်သငျသညျအရာခပ်သိမ်း၏အနှစ်သာရလွဲချော်မက, သင်ရုံသင့်ရဲ့ wheelhouse နှင့်ကုန်းပတ် polish ဖို့ကြိုးစားနေပါလိမ့်မယ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာဝနာသို့မဟုတ်ယောဂ (ed) မှတဆင့်သင့်ရဲ့သေသပ်သင်္ဘောအနက်ဆုံးသောတွင်းဆီသို့ဦးတည်ရွက်လွှင့်မှဆက်လက်ထက်ပွတ်။
ဝိညာဉ်တော်သည်, ကိုယ်ခန္ဓာနှင့်စိတ်ဝိညာဉ်: ကဘာလဲနှင့်၎င်းတို့၏ function ကိုကားအဘယ်သို့နည်း
Tags:: avatar, ဝိညာဏ်၏အဆငျ့, ညီမျှ, အထူးပြုလုပ်ထားသော, စိတျဓာတျ, ယုံကြည်ခြင်း, ကိုယ်ခန္ဓာ, ကုမ္ပဏီ, သေချာစွာစဉ်းစားခြင်း, ဘာသာ, ခြင်း simulation, ဝိညာဉျ, စံနစ်, ပွောငျးလဲခွငျး, ယောဂ, အသက်ဝိညာဉ်
3 မှဇူလိုင်လ 2019 14: 34
ဘယ်လို viz ဖြေဆိုရန်ရိုးရှင်းပါသည်။ ခွေုံမရှိကိုယ်ကျင့်တရားကျောရိုးရှိသည်နှင့်အလွယ်ကူဆုံးလမ်းကြောင်းရွေးချယ်နိုင်သည်။ ပထမဦးဆုံးမျက်မှောက်မှားယွင်းတဲ့မျက်စိမှာအသေးစားနှင့်အမှုအရာအဖြစ်တည်းခိုနေဖြင့်ကြီးမားသောဖြစ်လာသည့် Madurodam စီးပွားရေးလုပ်ငန်းထို့နောက်အတူစီးပွားရေးလုပ်ငန်း mask မှအဖြူကုမ္ပဏီကြီးနေဆဲရှိသေး၏။ ဥယျာဉ်အဘို့, hegjes နှင့်နုတ်မြောင်းများအမှန်ပင်ကောင်းစွာထားရှိမည်ဖြစ်ကြောင်း ..
3 မှဇူလိုင်လ 2019 18: 34
ပြည်သူ့သူတို့ကသဘာဝရာထူးတိုးသောတစ်ဦး disorders လူ့အဖွဲ့အစည်းဘဝ၌နေသောသတိရှိရှိ / မသိစိတ်ကိုငါသိ၏။ ကနွားတွင်ပါဝင်ရန်ဆက်လက်လုံခြုံသောကွောငျ့သူတို့ကအစိုးရကိုအေးစက်နေဖြင့်တတ်နိုင်သမျှရွှေ့ပြောင်းနှင့်။ ဤသည်ဆက်ဆက်လျှို့ဝှက်အဖြစ်မှတ်နိုင်ပါသည်။ တစ်ခါတစ်ရံအေးစက်နဲ့မလုံလောကျတဲ့နွားအဖြစ်ပြုမူ။ ထိုအခါအီ / မငြိမ်သက်မှုကိုချိုးဖျက်။ ကံကောင်းထောက်မစွာ, အမှန်တကယ်ငါတို့သည်ကိုယ်ကိုကိုယ်ရှာတွေ့ထားတဲ့အတွက်အခြေအနေကဘာမှပြောင်းလဲလာသောဂုရု, ဘာဝနာစသည်တို့ကို palliatives ရှိပါတယ်။ ဂုရု, စနစ်ဖို့အရေးပါမဟုတ်အရသာရှိတဲ့မရေရှိပါတယ်, ဒါကြောင့်လူတိုင်းဂုရု၏ ramblings ရန်၎င်း၏အနက်ကိုပေးနိုင်ပါသည်။ ဘာဝနာဟာပိုနေမြဲကျားနေမြဲအခြေအနေကိုရွှေ့ပြောင်းဖို့နောက်ထပ်နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်နှင့်သင့်ကိုယ်ပိုင်အရေးပါမှုထွက်ပြေးရှိခြင်း။ ဒီ script ကိုကနေယောက်ျားတွေအတွက်အားလုံးပဲကောင်းလှ၏။ သူတို့ဟာအမည်ရဘယ်တော့မှသဘာဝပိုနေမြဲကျားနေမြဲအခြေအနေကိုတာဝန်ရှိသည်သုတေသနများ၏ဘာသာရပ်နှင့်အရာဝတ္ထုဖြစ်ကြသည်။ သူတို့သည်ဝမ်းမြောက်အဲဒီမှာဂုရု, ဘာဝနာစသည်တို့ကိုဘာတွေလဲသူတို့ထဲကနွားအာရုံမှမတည်ရှိ။ ၎င်းတို့၏ဦးခေါင်းချမရှိသောကြောင့်လည်းသိုးစုကိုကောင်းလှ၏။ အမှန်စင်စစ်သူတို့နွားနှင့်အတူတိတ်ဆိတ်ပြေးရှိနေဆဲဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာ '' ဂုရု ', ဘာဝနာပံ့ပိုးပေးစသည်တို့ကိုများ၏အများစုသည် script ကိုယောက်ျားလေးများနောက်ခံရှိသည်သောအဘယ်သူမျှမတိုက်ဆိုင်မှုဖြစ်ပါတယ်။
31 မှဇူလိုင်လ 2019 14: 54
ဂျော့ခ်ျ Kavassilas အကြောင်းကိုဤနည်းပြောတတ်: သင် (ဒါဥပမာခြင်း simulation သီအိုရီ) သဘာဝအမိန့်, နတ်ဘုရားများ၏ hologram နှင့် hologram နည်းပညာများ
ဒါကြောင့်သူကယ့်ကိုသူတို့ကဒီ "hologram နည်းပညာ" နှင့်ဆက်နွှယ်နေသောအဆိုပါခြင်း simulation သီအိုရီအတွက်ပဒေသာနေသောလူများကိုပြောပါတယ်
သငျသညျခြင်း simulation ၏မျိုးစုံအဆင့်ဆင့်ရှိပါတယ်သည်ဟုဆိုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ထိုအဖြစ်အပျက်အတွက်ကျနော့်အမြင်ရှိသော 1 အလွှာအတွက် Luciferian ခြင်း simulation ။
အဆိုပါ "အနုတ်လက္ခဏာ Luciferian အနိမ့်" အခြားမွကွေီးအဆငျ့အကြားကစားများနှင့်အများကြီးထပ်မံရောက်ရှိသော "အပြုသဘောအနိမ့် Luciferian" နတ်မင်းကြီး။
ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုခြင်း simulation အကျင့်ကိုကျင့်လမျး၌တအလယ်ပိုင်းအမှန်တရားများအတွက်အကြောင်းပြချက်ဖော်ပြ, ဖွဲ့စည်းပုံမှာ / အတိုင်းအတာ .. သဘာဝအမိန့်ဖြစ်လာသည့်နတ်မင်းကြီးနယ်ပယ်တွင်တုပပြုလုပ်ပေးထား?
ဒါဟာရုံသာ "အဖြစ်မှန်" နဲ့အလုပ်လုပ်နိုင်သည့်, မွမ်းမံဘယ်တော့မှ?
31 မှဇူလိုင်လ 2019 19: 32
သင်အမှန်တကယ်ကောင်းသောကွမ်တမ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရှင်းပြချက်ကိုနားလည်ပါလျှင်သင်ဝေါဟာရကို '' ခြင်း simulation '' methaforisch နှင့်လည်းဝေါဟာရကို "holographic Project" မှန်ကန်သောမဟုတ်ပါဘူး (နှင့်အချိန်ကိုအကောင်းဆုံးတင်စားမှုများကိုထမ်းဆောင်နိုင်) ထိုနားမလည်ကြောင်း။ နားလည်သွား
ကျနော်တို့ဂျော့ခ်ျ Huppelepup ဖို့ WingMakers ၏ ... အမည်များအမြိုးမြိုး bijhalen နိုင်သည်သို့မဟုတ်သင်ရုံကိုယ့်ကိုကိုယ်စင်ကြယ်သောယုတ္တိဗေဒကိုရှာဖွေပေမည်။
သငျသညျတဖနျကအနုတ်လက္ခဏာ Luciferian အနိမ့်၏ hodgepodge နှင့်နတ်မင်းကြီးပါစေ။
အတွေးအခေါ်များအမျိုးမျိုးတို့ကို (ပုံရိပ်စစ် / hologram) ၏ကြောင်းရောနှောဝိညာဉ်ရေးမှာကရှုပ်ထွေးခြင်းနှင့်အောင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်အရာခပ်သိမ်းတဆင့်ကြည့်ရှုရန်အမှန်တကယ်တော်တော်လွယ်ကူပါတယ်အခါဒါဟာဝင်္ဖန်တီးပေးပါတယ်။ သငျသညျအထူစာအုပ်များမှအတော်လေးငို lezrn ဖြစ်သို့မဟုတ်မယ့်အားလုံးရိုးရှင်းရလိမ့်မည်။
ငါသည်သင်တို့ကို Simulator Simulator ဖန်တီးနိုင်ပုံကိုတော်တော်များများဆောင်းပါးများအတွက်ရှင်းလင်းတင်ပြပါသည်။ တခါတရံသူကပထမဦးဆုံး PF တစ်ဦးဝင်္တည်ဆောက်ခြင်းအထောက်အကူပြုပါဘူးသင်တို့အဘို့ကအားလုံးကိုဖတ်ရှုဖို့ကောင်းပါတယ်။
« ပျမ်းမျှဒတျချြစိတ်ဓာတ်ပျက်စီးကိန်းနဲ့ရင်ဆိုင်ရတာဖြစ်ပါတယ်: အားလျော့ခြင်းနှင့် passive
Ursula ဗွန် der Leyen (အနာဂတ်အီးယူသမ္မတ) ကိုဗြိတိန်ဘုရင်စနစ်ကဲ့သို့တူညီသောဖြစ်မဖြစ်ကိုသွေးကနေအမှန်တကယ်ရှိပါသလား? »
သုံးသပ်ကြည့်ရှု op ဘိုးရင်း ၇၃၇-၈၀၀ (လေယာဉ် PS737) ကိုဖြိုချခဲ့တဲ့အီရန်လေယာဉ်ပျံစနစ်ဟာတိုက်ခိုက်ခံရသလား။
Wilfred Baker op ပြည်တွင်းစစ်၏ပထမ ဦး ဆုံးအရိပ်လက္ခဏာမြင်နိုင်ဖြစ်လာလျက်ရှိသည်ဘယ်လောက် Trump ယခုကုန်းနှီးခဲ့ပြီနည်း